ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူ ဘယ်သူလဲ....ပြော”
မင်းတြားကြီးရဲ့ဘုန်းတော်ဖွဲ့ တွေ တယ်ကောင်းပါလား ဗျို့ ။
အဲဒီ ဆင်က ခရုသင်းစွဲနေသေးလားဗျ..
သိပ်ကြိုက်တယ်။ 2008 တုန်းက မဖတ်ခဲ့ရဘူး။ အခုမှဖတ်ရတယ်။ Fantastic ပါဘဲ။
I can't cheer ur creativity anymore:DBRAVOOOOOOOOOOOOOOOOO...............
အေးလေ ကျမလည်း အဲ့သလို ထင်မိသား...ဟိ ဟိ ဟိ :P
ဖတ်ကြည့်တာနဲ့ ..ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ ..
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ကျောက်ဆည်က ဆင်ကပွဲတွေ ကြည့်ဘူးပါတယ်..။
ကျောက်ဆည်က ဆင်တွေမှာ ဦးနှောက်ရှိတယ်လို့ ....
ဟို တံဆိပ်...ဒီတံဆိပ်..အဲ...ကကြိုးတန်ဆာတွေလူမြင်ကောင်းအောင်ဆင်ထားတဲ့ ..
ဦးနှောက်မရှိတဲ့ခပ်မဲမဲ အရုပ်ကြီးပါဗျာ...။
Mg Ng..... မင်းတြားကြီးဘုန်း မိုးသို့ချုန်း၊ ပွေးပုန်းပေါင်မှာ မနေသာတဲ့....း-)။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း.... မပြောပါနဲ့တော့ ကိုကြီးကျောက်ရယ်။ ဟိုတုန်းက ဆင်ဖြူပစ္စယကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ဆိုပဲ။ အခု ဆင်ဖြူတွေကတော့ သူတို့ပေါ်တယ်ကြားပြီးကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တုန်းကနဲ့မတူအောင် မိုးခေါင်ပူပြင်းလို့ ရေတွင်းရေကန်တွေ ခန်းခြောက်တော့တာပါပဲ။ အင်းလေးကန်တောင် အချောင် အဆစ်ပါသွားသေးတယ်။ ဟော...ရွာပြန်တော့လည်း ရွာလည်လမ်းမှာ မိန်းမတွေပါ ခါးတောင်ကြိုက်ပြီး သွားလာနေရတယ်။
Myanmar.... ၂၀၀၈ ကစပ်ခဲ့ပေမယ့် မတိမ်ကောသေးဘူး။ အခုအထိ အကျုံးဝင်ဆဲ။း-)
Shinlay.... ဒီကဗျာကို ကြိုက်ပုံထောက်တော့ ကျောက်ဆည်ဆင်ကိုတော့ မုန်းပုံပဲ။
Gyidaw.... ဂျီးဒေါ်ရဲ့ ဘရာဗိုကလည်း ဘိုးဘိုးအောင် ဝလုံးတွေ ကျနေတာပဲ။
ချစ်ကြည်အေး.... အဲ့သလို ထင်တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာကို သတင်းပို့မှ ဖြစ်တော့မယ်။ (မချစ်ကြည်အေးရဲ့ အထင်မှန်ကြောင်းကိုပါ။)
သက်..... “သတင်းစာတရက်မဖတ်လိုက်ရသူသည် တခေတ်နောက်ကျသွားသည်” ဆိုတဲ့ စကားက မြန်မာပြည်အတွက်တော့ မမှန်ဘူးထင်တယ်။
TNS..... ဒီကျောက်ဆည်ဆင်ကတော့ ဦးနှောက် ရှိပုံပဲဗျိုး။ ဒင်း ဆင်ကြံကြံတာ အများအသိပဲ။ ဒီဆင်မိုက်ကြီး ဒူးမတုပ်နိုင်သေးလို့ အများစိတ်ညစ်ရတယ်။
နအဖက ကုလားတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒီမိုငတုံး မဗေဒါကလဲ ကုလားမကို နိုင်ငံရေး ဇတ်ခုံပေါ်မှာ နေရာရအောင် ကူညီပေးနေပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကုလားတွေ ဒုက္ခပေးနေတာကို အားလုံးမြင်နေကြတာပဲ။ အဲဒါကို လုံးဝဂရုမစိုက်ပဲ ဒီမိုနဲ့ နအဖတွေဟာ ကုလားဖင်ရက်ပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်နေပါတယ်။ ကုလားကလဲ နှစ်ဖက်စလုံးကို ညာပေါင်းပြီးခွစားနေပါတယ်။ ကုလားဖင်ရက်တဲ့ ဒီမိုငတုံး မဗေဒါလုပ်ရပ်ကို ကော်မန့်ကနေ ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။
ကုလားဖင်ရက်သူများနှင့် ကုလားထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူများကို ဆန့်ကျင်နေသည့်
I fully respect Senior General Than Shwe who is the achiever and patriotic leader.
I understand what he's doing for the good sake of Myanmar.
Patriotoc Citizen said...
ko Paw,what had you done so far for the country?
I can tell you are the opportunist looking for shortcut.
အပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတာ ကားပါမစ်ရထားပုံရတယ်
I'm just normal human living simply but who can able to see the thing correctly without jealously.
I'll loyal to the country where I belong even if I'm staying at Singapore I'll abide it's laws and regulations without exceptions.I'll appreciate Singapore and their leaders for allowing me to live and getajob.
It's my style.I have no advantages for saying like this.
Do u know why they favour this young girl to speech . The reason is she possess big bust & pretty indian face .:P
We have many policitical prisoners and they also got children but they didn't get this chance because their daughter don't possess such things .:)
Now, Britian has created this lady to make long battles & revolutaion again in our country , it will take time another next 25years of revolution periods .Even DASSK cannot solve it out .:P
Whether Buddhism person can bealeader at Non-Buddhism country . Please prove it .:P
Soutt Yuu, Zaw Myo.... shut up your mouth or will put Moe Thee's dick in your mouth...
မင်း.. ခေတ်နောက်ကြနေပြီ။ မိုးသီးခေတ်မရှိတော့ဘူးကွ။ အပေါ်မှာ ရေးထားတာ မတွေ့ဘူးလား? ကုလားမက မိုးသီးထက်တော်တယ်ဆိုပဲ။ ဟဲဟဲ.. ခေတ်မီသူတိုင်း ကုလားမက အတော်ဆုံးဆိုတာ သိကြပါသည်။
ခေတ်နဲ့အမှီ ကုလားမကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့သည်
We knew that you are going everywhere to promote your fathers-in-law who are Kalars.
Come on new post,Ko Paw.
ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိသွားပြီလား? ဒါဆိုရင် အများလိုပဲ ပြုမူနေထိုင်တော့မယ်နော်။
☀ ကိုယ့်အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ လက်တစုတ်စာ ကုလားတွေကို ကြောက်နေရတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ . .. ကျုပ်လဲ ကုလားတွေကို ကြောက်တော့မယ်။ ( ကုလားတွေကို ကြောက်တယ်ဗျို့။ ၀ါးဟားဟား )
☀ မြန်မာတွေဟာ အချင်းချင်းပဲ စောက်တင်း စောက်ဖျင်းတွေပြောပြီး ကုလားကို ထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ရပါတယ်။ ကျုပ်လဲ အဲလိုပဲ ကုလားထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်တော့မယ်။ ဟဲဟဲ
☀ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ၊ စစ် ၊ အကြမ်းဖက်မှု စတဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ ပတ်သက်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို အကောင်းမြင်ပေးပါမယ်။
☀ ဘာသာခြားတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့၊ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ မွတ်ဆလင်ကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာအဖြစ် မှတ်ယူပေးမယ်နော်။
☀ သူ့ချွေးမကိုတောင် ကြာကူလီခိုခဲ့သူ . . မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီ လူသတ်သမား မိုဟာမက်ကို သူတော်ကောင်းအဖြစ် သဘောထားတော့မယ်။ ကျေနပ်တော့နော်။
Padauk Yeik Reader said...
I notice Zaw Myo's comments are very annoying and moreover they are racist too.
I'd like to suggest you to delete some comments which are racists and it's also unacceptable according to one of your comments rules in Padauk Yeik. ( " Do not post anything which is racist, sexist or homophobic ")
Pls monitor his comments too.
Padauk Yeik reader
ဒီခေတ်ကြီးမှာ လူနည်းစုက လူများစုကို စော်ကားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဧည့်သည် ကုလားတွေက လုပ်ချင်တာလုပ်.. ဆိုးချင်သလိုဆိုး အိမ်ရှင်တွေမှာ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကုလားတွေဟာ ဘာသာရေး အရေခြုံပြီး အိမ်ရှင်တွေကို စော်ကားနေတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ အဲဒီလူတိုင်းသိနေတဲ့ အမှန်တရားကို ထုတ်ပြောရင် Racist ဆိုပြီး အပြောခံရပါတယ်။ ကုလားတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေကို ချေးယို သေးပေါက်မကျန် နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ လူအခွင့်ရေးနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုသည်ဟု သဘောထားရ၏။ မြန်မာ မိန်းခလေးတွေကို စံနစ်တကျ ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ကုလားတွေလုပ်ရပ်ကို မသိဟန်ဆောင်ရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာ ဘုရားမြေကို ခိုးပြီး ပလီဆောက်တာကို မသိဟန်ဆောင်ရ၏။ မကျေနပ်၍ ထုတ်ပြောလျှင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖန်တီးတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံရပါတယ်။ လူအခွင့်ရေးနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုသည်ဟု သဘောမထားပါ။ အိမ်ရှင်ဆိုတာ အနှိမ်ခံဘ၀ပါလားဗျာ။
ဧည့်ခန်းမှာ ချီးပါနေတဲ့အဖြစ်ကို ပြုံးပြုံးလေးမကြည့်၍ အပြစ်တင်ခံနေရတဲ့
It's Suu kyi and group who welcomer NGO and UN for helping Myanmar people as like Beggars.
She encouraged sanctions but support NGOs and other masked organisations to enjoy in Myanmar like Kings and queens.But Suu Kyi let her sons good life in 1st class world countries.
Come on... is this citizen of Myanmar?
That's why she is getting retribution(KARMA)as like waht's happening to her now.
Dharmma is straight and sincere.
She encouraged sanctions but support NGOs and other masked organisations to enjoy in Myanmar like Kings and queens.
But Suu Kyi let her sons good life in 1st class world countries.
အောက်ဆုံးမှာ အမှိုက်တွေ တော်တော်လေး ပုံနေပြီ
ပုံ - စိတ်ညစ်ပြီး လှည့်ပြန်သွားသူ
ကျုပ်မိဘတွေရော နီးစပ်ရာလူတွေကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ၈၈မှာ ကုလားမြအေးဆိုတာ ကြားဖူးလားလို့။ အားလုံးက ကျောင်းသားတွေကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှားတဲ့နာမည်ထဲမှာ မြအေးဆိုတာ ကြားဖူးတာ မရှိဘူးတဲ့။ အဲဒီမြအေးဟာ မကြာသေးမီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ထက် လူထုက ပိုပြီးယုံကြည် အားကိုးချင်း ခံရတယ်လို့ ဒီမိုမီဒီယာမှာ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မြအေးရဲ့ သမီးဆိုတဲ့.. နာမည်ကို တွင်တွင်ကြီးသုံးနေပါတယ်။ ဒီတော့ . . . မြအေးဟာ ဘယ်ကျောင်းသားအဖွဲ့မှာ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ရာထူးကို ယူခဲ့လို့ အဲဒီ ဂုဏ်ကိုရထားလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။ တကယ်လို့ ဒီမိုငတုံးတွေအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစား ကုလားမကို ခေါင်းဆောင် တင်ဖို့ စီမံနေတာဆိုရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ။
စကားပြောဖို့ ဘာသတ္တိုရှိဖို့လိုသလဲ? ကုလားမမှာ ငါတို့ထက် ဘာအရည်အချင်းရှိလို့ အဲလိုတက်ပြောခွင့်ရတာလဲ? အဲလိုတက်ပြောဖို့ မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ ကုလားမကိုရွေးချယ်တာလား? အဲဒါကိုဖြေကြည့်လေ။ မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေက ကုလားမ အင်္ဂလိပ်လို ပြောသံလဲကြားရော လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ကုလားမချီးကိုစားပါ။ ကုလားမသေးကို သောက်ပါဆိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ကုလားမဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပါဆိုပြီးလဲပြောနေတယ်။ တကယ်စွန့်စားနေတဲ့သူတွေက ပါးစပ်နဲ့ ၅ မိနစ်ပြောတဲ့ ကုလားမတစ်ကောင် လောက်တောင် အရေးမပါဘူးဖြစ်ကုန်တယ်။
အခုလည်း သူ့စကားပြောတာ ထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ အသံဖိုင်ဆိုပြီး ပို့နေတယ်။ အသံဘက်ကို အရမ်းကို အလေးထားနေတယ်နော်။ အသံအနေအထားကို ဘယ်သူကတွေက လေ့ကျင့်ပေးတာလဲ? ( အတွေးအခေါ်ရှိရင် ဘလော့ထောင်ပါလား။ အသံနဲ့ လုပ်စားနေတာ ) သူ့ကို ဒီနေရာရောက်အောင် ဘယ်သူတွေက ပံ့ပိုးနေတာလဲ? ၁၆ ရက်နေ့မှာလဲ ခုံချပြမယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီနေ့မှာ ဒီမိုမီဒီယာတွေက တွန်းတင်ပွဲလုပ်ဦးမှာပဲ။ အလှူငွေတွေ ကိုယ့်ဖာသာ ထည့်ပြီး ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်ဦးမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးရင် ကုလားမက သံရုံးရှေ့မှာ ဦးဆောင် ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ အကွက်တွေ လာပါလိမ့်မယ်။ အမတ်တွေနဲ့လည်း စကားတွေ ပြောပါလိမ့်မယ်။
ပုံစံကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခိုးကူးဖို့ ကြိုးစားနေဟန်ပေါ်တယ်။ မြအေးကို ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လို့ လိမ်ပေးထားတယ်။ မြအေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ထက် လူထုက ပိုပြီးလေးစားတယ်ဆိုပြီး လိမ်ပေးထားခဲ့ပြီးပြီ။ သူ့သမီးက သူ့အဖေတာဝန်ကို ဆက်ပြီးထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ အကွက်အတွက် စီမံနေတာ သိသာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာမှာ ကုလားမြအေး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှာ ကုလားမကို အစားထိုးဖို့လုပ်နေတာ။ ဒီမိုငတုံးတွေအတွက် ခေါင်းဆောင်အသစ်ကို ဘယ်သူတွေက ဖန်တီးပေးနေတာလဲ? မကြာမီမှာ မြန်မာ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ မဝေနှင်းပွင့်သုန် ဆိုတဲ့စကားကို ဒီမိုမီဒီယာတွေမှာ ဆက်တိုက်ကြား လာရတော့မှာပါ။ စောင့်ကြည့်ပါ။
ကျနော်လည်း ထင်တော့ ထင်မိသား။ သူပါပဲလို့။
ဒီမိုဘလော့အမည်ခံပြီး ဆန့်ကျင်ဖက် ကော်မန့်ကို လက်မခံရဲတဲ့ ပျူနိုင်ငံ ဘလော့မှ ကုလားမအကြောင်း တုံပြန်ရေးသားချက်ပါ